Tim Berners-Lee Anoti Kupinda paInternet Kunofanirwa Kuva Kodzero Yakakosha | Linux Vakapindwa muropa
Tim Berners-Lee Anoti Kupinda paInternet Kunofanirwa Kuva Kodzero Yakakosha
Tim Berners-Lee (MuBritish musayendisiti wemakomputa uyo isu tine chikwereti kugadzirwa kwewebhu muna 1989) akazivisa anga ari pano kwemazuva akati wandei ane hanya nekuvapo kwe'digital split ' wepasi rose nekuti vechidiki vakawandisa havagone kubatana.
Uye ndezvekuti mutsamba yakaburitswa, Berners-Lee naRosemary Leith, vese vari vaviri vakatanga sangano reWeb Foundation, sangano risingabatsiri, vakanyora kuti: "Vechidiki vakawandisa vanoramba vakasiyiwa uye havagone kushandisa Webhu kugovana nyaya dzavo, matarenda uye mazano. " Kwavari, kupinda paInternet kunofanirwa kuzivikanwa sekodzero inokosha.
Mune iyo posvo yekumaka 32th yekupemberera kweInternet, Tim Berners-Lee, iye akatanga weWorld Wide Web, akanyora kuti hurumende dzinofanira kuedza kuve nechokwadi chekuwana pasi rose yakakurumidza internet, kudzikisa dhijitari kupatsanura uye zvirinani kugonesa tekinoroji makambani
"Hurumende dzinofanirwa kudzika mitemo inoshanda inobata michina uye inoita kuti makambani azvidavirire pakugadzira zvigadzirwa nemasevhisi ane mutoro," Berners-Lee akanyora muchinyorwa chakanyorwa naRosemary Leith.
"Sezvatakaita nemagetsi muzana ramakore rapfuura, tinofanira kuona kuwaniswa kweInternet sekodzero inokosha uye tinofanira kushanda kuitira kuti vechidiki vese vagone kubatana neWebhu inovapa simba rekuumba nyika yavo."
“Migumisiro yekusiiwa iyi inobata munhu wese. Ndedzipi pfungwa dzakapenya dzevechidiki dziri kudivi risiri iro rekuparadzaniswa kwedhijitari? Bvunza vanyori vanyori, uchiona kuti "munhu wese wechidiki asingakwanise kubatanidza anomiririra mukana wakarasika wemifungo mitsva uye hutsva hunogona kushandira vanhu."
Kureba kwekuparadzaniswa kwedhijitari kwakaratidzirwa panguva yechirwere checoronavirussevanhu vaiyedza kushanda nekudzidza kubva kumba, kazhinji vaine zvakaderera pane zvakanakira internet kubatana. Sekureva kwePew Research Center, muUnited States moga, zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvevanhu vanogara mumaruwa vanokwanisa kuwana Broadband, zvichienzaniswa ne79% yevanhu vanogara mumasabhabhu. Zvakare, iyo Federal Komisheni yeKomisheni mepu, iyo isingafarirwe nemunhu wese, haipe yakajeka zvachose mamiriro eiyo mamiriro ebroadband kuwana muUnited States.
Berners-Lee naLeith vanonyora kuti pasi rose dambudziko rakakomba zvakaenzana. Chetatu chevanhu vari pakati pemakore gumi nemashanu kusvika makumi maviri nemana havana mukana weInternet, sekureva kwesangano reUnited Nations, International Telecommunications Union. "Vamwe vazhinji havana data, zvishandiso, uye kubatana kwakatendeka kwavanoda kuti vawane zvakazara pawebhu," Berners-Lee naLeith vakanyora mutsamba yegore negore yeWeb Foundation.
"Kutaura zvazviri, chetatu chete chevaya vane makore ari pasi pe25 vane Indaneti kumba, sekutaura kweUNICEF, zvichisiya 2.200 bhiriyoni vechidiki vasina mukana wakadzikama wavanoda kudzidza online. Ndiani akabatsira vamwe vazhinji kuenderera mberi nedzidzo yavo mukati medenda. "
Berners-Lee naLeith futi taura kudiwa kwekudzivirira vechidiki pamhepo kubva mukushungurudzwa uye kusanzwisiswa, "Izvo zvinotyisidzira kutora kwavo chikamu uye zvinogona kuvamanikidza kuti vabve mumapuratifomu zvachose," vakanyora. "Izvi zvinonyanya kuitika kune avo vasina kunangana zvakanyanya nekuda kwerudzi rwavo, chinamato, hutano, kugona uye mukadzi."
Ivo vanyori vanyori vetsamba Vanokumbirawo mukana weInternet kuti uonekwe sekodzero inokosha uye ivo vanotaura kuti mutengo wekuona kuti vechidiki vese vabatanidzwa "vari mukati medu. Nekupa mari netiweki, kupa rubatsiro nekutsigira nharaunda, tinogona kuisa dandemutande mumaoko evadiki vese vari panyika, ”vanodaro. "Kurudziro yekubatanidza nyika ichaita kuti vechidiki vakanganwe."
Berners-Lee naLeith vanoratidza kuti Alliance for Affordable Internet (A4AI), chirongwa cheWeb Foundation, "yakafungidzira kuti imwezve mari inosvika mabhiriyoni mazana mana nemakumi masere nemasere emadhora pamakore gumi inogona kupa munhu wese mukana wepamhepo wekubatanidza. Kuisa izvo nemaonero, izvo zvakaenzana ne $ 428 chete pamunhu wevanhu 116 bhiriyoni vanogara vari kunze kwenyika nhasi.
Kupa mukana wekufambiswa kwepasirese mukati memakore gumi anotevera "kwaizovhura mari inofungidzirwa $ 8,7 trillion mukubatsira kwehupfumi," vanonyora vachidaro ongororo nyowani kubva kuTony Blair Institute for Global Change.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Tim Berners-Lee Anoti Kupinda paInternet Kunofanirwa Kuva Kodzero Yakakosha
Kune maRuberticides, zvese iRudyi.
Izvo hazvina kudaro, paInternet unogona kuzvidzidzisa, kuzvizivisa (pamwe nekuzvizivisa zvisizvo sezvauri muhupenyu chaihwo), shanda, varaidza iwe, nezvimwe; Mune mamwe mazwi, inokupa iwe dzimwe dzekodzero dzakanyanya sedzidzo / ruzivo uye basa uye urikuzoti hazvionekwe sekodzero, IZVO KODZERO!
Indaneti haisi "Kodzero" nekuti nekuda kwekuvapo kwayo pamwe nekuchengetedzwa kwayo, inoda zvivakwa nevanhu vane mutengo usingabhadharwe, nekuzvisimbisa se "Kodzero" saka munhu wese anofanira kukwanisa kuinakidzwa, senge Yakakodzera Yakakosha kune Rusununguko, iyo yemahara nekuti Rusununguko rwako harubvise kune rwevamwe, kugona kuishandisa zvizere pasina kubhadharira iwe newe nzanga. Zvakasiyana zvakanyanya nekushandura chimwe chinhu chiri seSevhisi kuita "Rudyi" nekuti kuti uzviwanire kunze kwekusiiwa zvichave zvakafanira kumanikidza zvimwe kuitira kuti munhu wese agone kuzvifarira kana kutora mari kubva kumunhu wese kukuvadza zvinhu zvavo kuti vape zvakataurwa. "Right" Kuti hapana vimbiso yekuve wakasununguka pahuwori, sehunhu hwayo, kuti inosangana nezvinodiwa nemunhu wega wega uye kuti hazvipe chigadziro chekutonga kwezvematongerwo enyika.